Dhallaanka kelinimada ku yimaada oo ey haysato hooy la'aan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhallaan keli-nimo dalka ku yimid. Sawirle: Sveriges Radio
Dhallaanka kelinimada ku yimaada oo ey haysato hooy la'aan
La daabacay torsdag 8 oktober 2015 kl 16.00
Dhibaatooyin ballaaran ayaa ka aloosan sidii hooy loogu heli lahaa dhallaanka keli-nimada dalkan ku yimaada ee magan-gelyo doonka. Waana midda degmooyinka ku khasabta iney dhaqaale xad dhaaf ah ku siiyaan shirkadaha mulkida loo leeyahay sidii ey u meleeyn lahaayeen dhallaankaasi.
Baaritaan uu sameeyay war-geeyska maalinlaha ee DN iyo in ugu yaraan nus bilyan dhaqaale gaarsii-san ey shirkadahaasi qaateen wixii ka dambeeyay sannadkii 2014.
Waxaa sidoo kale ay baahi ballaaran ka taagan tahay guryaha loo yaqaanno goobaha hvb ee dhallaanka keli-nimada ku yimaada lagu meeleeyo. Iyada oo laga bilaabo kala-guurka sannadka iyo midka foodda innagu soo haya loo suurtageliey maamullada degmooyinku iney dejin karaan dhallaanka aan baahida badan qabin goobo ka sahlan.
Per-Arne Andersson, waa madaxa laanta tacliinta iyo suuqa shaqada ee ururka maamullada degmooyinka iyo gobollada ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaanno SKL.
- Waa mid iminka loo baahan yahay in la helo noocyo hooy oo ka duwan kuw lagu magacaabo hvb-hem, looguna baahan yahay si degdeg ah. Iyo in wax la qeexo xeerarka la adeeg-san kari lahaa, sidii loogu tabaabushee-san lahaa, isla-markaana baadi goob loogu geli lahaa helista shaqaale ku habboon.
Noocyadan kala duwan ee deegaannada dhallaanka keli-nimada dalka ku yimaada ayaa ahaa sannooyinkii ugu dambeeyey kuwo uu ku taamayay ururka SKL in la hir-geliyo. Per-Arne Andersson ayaa ku tilmaamay in xaaladda u socotay si dardar la’aan ah.
Maantadan lagu jiro ayaa dhallaanka da’doodu ka wayn tahay 15 lagu casumaa oo keliya guryaha lagu magacaabo hvb, iyo guryaha xannaanada iyo wixii la mid ah. Dhallaanka da’doodu ka hooseeyso 15 jir ama leh baahi ballaaran oo keliya ayaa lagu casumaa qooysas iney la noolaadaan, waxa loo yaqaanno familjehem.
Illaa iyo sannadkan ayey dalka yimaadeen dhallaan keli-nimo ku socda oo gaarsii-san 15 000. Halka saadaalinta marba marka ka dambeeysa isbedel lagu sameeynayey. Waana midda adkeeysay in maamullada degmooyinku ey ka tabaabusheeystaan howlaha la xiriira.
Iminkase waxaa suurtagal ah in la dejiyo dhallaanka hooyo ka sahlan iyo sidoo kale in la joojiyo xeerka ah in dhallaanka ku dhaqan hooyga hvb la dejiyo mid walba qol u gaar ah.
War-bixin dhaqaale oo uu maanta soo ban-dhigay ururka maamullada degmooyinka iyo gobollada ayaa carrabka lagu adkeeyay in ey howlahaasi kaga baxaan maamullada degmooyinka dhaqaale aad uga fara badan sidii hore. Waana mid loo baahan yahay in xeerka wax laga bedelo sidii looga tabaabusheeysan lahaa howlahaa, sida uu sheegay Per-Arne Andersson.
- Xaaladda sannadka lagu jiro oo keliya ayaa saameeyn ku yeelan doonta sannadka foodda innagu soo haya iyo sannadaha xig, sidaa waxaa yiri sa Per-Arne Andersson, ahna madaxa laanta tacliinta iyo suuqa shaqada ee ururka SKL.
Jamaal oo keli-nimo dalka ku yimid iyo qaxiisii